Ukufaka i-gvSIG Mobile - i-Geofumadas
NgoSeptemba, 2011 GPS / Izixhobo, GvSIG
Okwangoku ndandifake i-gvSIG Mobile kwi Imephu yeMapper 100Ukuqwalasela ukuba ixesha lam lokuqala kwaye ndicinga ukuba eliseleyo kuloo nyaka ufumane ingenelo yamava, ndiya kufuneka ubhale njengoko wenzayo, hleze abanye bafumane into tin (i inkanda).
1 Yiyiphi inguqulelo
Inkqubo ifana nayo nayiphi na ukufakwa kwe-GvSIG Mobile kwi-Windows Mobile PDA 5 okanye ngaphezulu. Nangona kunjalo, ndiyisebenzisa:
Windows Mobile 6.5 Professional, ene-CE OS 5.2.21895
Oku kuqinisekiswa kwi-Start / Settings / Systen / About
Kwimeko ye-gvSIG, ndifaka i-0.3.0 Build 0275 version kwaye ngenxa yokuba Ndifuna ukubheja iJava, Ndiza kuwubeka kulo mshini (JVM) nangona kunjalo nakwi-PhoneME.
2 Khuphela iiprogram
Ukukhuphela i-gvSIG ndiyenzile kulekhonkco:
Ngale nto siya kufumana ifayile ebizwa ngokuba gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab
Ngethuba kunokuba kukho inguqu yakutshanje, ngoko kuyacetyiswa ukuba uqiniseke kwesi sixhobo:
Ndikhethile gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab, uqaphele ukuba le nguqulo ayinayo imfuneko yokufaka isicelo (incinci yomshini), inceba kuba ngaphambi kokuba benze. Kodwa ziyimiphumo esiyilindele emva kokuba utshintsho lomgaqo-nkqubo olwenzeka kwiJava emva I-Oracle iya kuthenga i-SUN.
Ngenxa yoko, ngaphezu koko kufuneka ukhuphe umshini obonakalayo obizwa ngokuba yiJ9. Ezinye zidibanisa kwizintlu ziphukile, kubandakanywa http://www.cs.kuleuven.be/~davy/phoneme/downloads.htm ebonakala kwi-manual ye-GvSIG ye-Mobile, ngoko ndiya kuphakamisa oku ukukhuphela i-J9:
Khuphela ithebhulethi ebizwa ngokuba yiJ9.zip, kuya kufuneka ulumke xa ungayifumani, kuya kufuneka ukhethe u- “Gxotha apha» hayi u-«Gxotha kwi-J9 \_», kuba oku kuyakwenza enye incwadi ebizwa ngokuba yiJ9 enokuthi kamva isinike.
Okokugqibela kufuneka sinethemba lokuba le nto siyigqibayo ikwimo ethi "J9 \_ PROJ11 \_ bin ..."
3 Layisha iiprogram kwi-Mobile Mapper
Uguqulelo lwe Windows Mobile ezisa iMobile Mapper 100 (kwaye ngokubanzi nawuphi PDA) idla ukuthatha isibini iingxaki kangako ukufaka MS yakho, phantse lonke kuba okuphunyeziweyo yakhelwe phezu Flash Player kwaye ngamanye amaxesha, ingakumbi Windows 7 na iyakwazi ukuhlaziywa okukhoyo okanye ayivumeli ukufaka izicelo ezingaxhaswanga. Kodwa oko kusombulule ngokukhuphela ngqo kwiphepha leMicrosoft, kwindlela yokukhuphela kwiidivaysi zeselula.
Into ebalulekileyo kukuba sinokubona kwi-PC izixhobo ezixhunyiwe, ngaphandle koko kufuneka sisidlulise ngekhadi le-SD.
Kukho izinto ezimbini kuphela zokulayisha:
-Ifayile gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab, esiyibeka ngaphakathi kwenye yeefolda, kule meko ndiyenza kwindawo ebizwa ngokuba yi "Idatha yesicelo". Ndikucebisa ukuba uyenze apho, ukuze ulandele le nyathelo lokuyalela ngenyathelo.
-Ifayile ebizwa ngokuba yiJ9, esiyibeka ngqo kwingcambu. Xa ujonge ingcambu, oko kuthetha ukuba kufuneka ube eneenkcukacha J9 kuchazo kwinqanaba apho ezinye iincwadi ezinenkcukacha Isicelo se Data, ConnMgr, Windows, nokunye
Oku kwenza ukuba umshini we-Java ulungele ukusebenza.
4 Faka i-gvSIG
Ukufaka i-gvSIG, kufuneka uhambe kwifolda apho silayisha ifayile.
Oku kwenziwa kunye Qala / uhlola, kwaye ke kule emulator yesikhangeli sikhangela "iNkcukacha zeDatha" ifolda, kwaye apho kuya kufuneka sibone ifayile. Ngonqakrazo olunye, inkqubo iqala inkqubo yokufaka; Ukuba kukho ingxelo yantlandlolo, iya kusazisa ukuba iyakutshintshwa. Kuya kufuneka ukhethe ukufaka kwisixhobo (isixhobo sam) hayi kwikhadi langaphandle (iKhadi loGcino).
Ukuyiphumeza, sikhetha «Ukuqala» kunye ne-gvSIG I-aykhoni yeselula kufuneka sele iphaneli ebonisa ukusetyenziswa.
Ikhonkco iqhosha kwaye ngenxa yoko i-splash imele iphakanyiswe imizuzwana embalwa uze udibanise inkqubo.
6 Iingxaki eziqhelekileyo
Okokuqala, ukuba inkqubo (Inyathelo 5), okanye shiya umyalezo wemposiso for Windows Mobile, into ebalulekileyo kukuba ukwazi ukuba uyithethayo into Ayinakusebenzisa kwifayile ebizwa g_mobile_launch_log.txt, ekhompyutheni ye-gvSIGMobile. Eyona nto ifanelekileyo, kufuneka ufumane umyalezo onje:
gvSIG ifowuni yefowuni yokuvula ifowuni:
Kucelwa ukuba ifolda enkulu ye-gvSIG: \_ gvSIGMobile:
Ukuhlola ukuba i-J9 ingcambu ...
Ukuqhayisa, aux.npos = -1
Ukuqhawula, yokuqala = 3
Ukugqithisa, Resp = \_ J9
Indlela ye-J9 idliwe: \_ J9
Ukubhala ifayile yokuqala.opt ngeendlela ezilungileyo ...
Ukuqulunqa iiparamitha zokuqalisa ...
I-parls ze-J9 = «-Xoptions file = \_ gvSIGMobile \_ Start.opt» en.prodevelop.gvsig.mobile.app.Launcher p = \_ gvSIGMobile m = J9
Indlela yeJ9: \_ J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe
Iiparamitha zeJ9: «-Xoptionsfile = \_ gvSIGMobile \_ Start.opt» en.prodevelop.gvsig.mobile.app.Launcher p = \_ gvSIGMobile m = J9
Ifowuni ye-gvSIG yaqaliswa ngempumelelo.
Ngokusekelwe kumyalezo, unokubona apho ingxaki. Lo ngumzekelo, ngokuqhelekileyo kuba ukubeka ulawulo J9, ukubona ukuba inkqubo uphengulula ithuba ukufumana phandle ingcambu ulawulo, ngathi ujonge ukuba ifakelwe kwikhadi SD okanye ukuba ifakelwe PhoneME:
Ukufumana indlela yekhadi le-sd ...
Ukucima '\_ J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe' kwingcambu ...
Ufumene umkhondo wekhadi le-SD: \_ Storage Disk
Ufumane umkhondo wekhadi le-SD: \_
Ifayile ayifumanekanga: '\_ J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe' kwiphina yamakhadi e-2 SD.
Ayikwazi ukufumana ikhadi le-sd, i-J9 ayifumanekanga!
Ukujonga ukuba i-PhoneME ingcambu ...
Ukucima '\_ phoneme \_ yomntu \_ bin \_ cvm.exe' kwingcambu ...
Ifayile ayifumanekanga: '\_ phoneme \_ yobuntu \_ bin \_ cvm.exe' nakweyiphi yamakhadi e-2 SD.
Ayikwazi ukuthola ikhadi le-sd, ifowuni ayifumaneki!
Ayikwazi ukuqala i-GvSIG Mobile. Mhlawumbi akukho JVM efunyenwe.
Musa ukulibala, i uluhlu lweposi le-gvSIG, kuba ngokuqhelekileyo umntu sele uye kwenzeka kwaye impendulo ikhona. Ukuba akunjalo, ngeposi elula kuluhlu kuya kuba neempendulo kuluntu ngokufanelekileyo ngempumelelo.
Ukuba akunjalo ... Ndizo zonke iindlebe ...
Post edlulileyo«Edlulileyo Iimagazini ze-3, ii-10 ze-geofumadas ezintsha ze-Agasti
Post Next thumbnails Post Related kudala thumbnails kunye pluginsOkulandelayo "